प्रकृतिको यस्तो उपहार ! खोलामा पानीको सट्टा यसरि सुन बग्न थालेपछि - IAUA
News देश धन सम्पत्ति बिदेश मनोरञ्जन रोचक प्रसंग
प्रकृतिको यस्तो उपहार ! खोलामा पानीको सट्टा यसरि सुन बग्न थालेपछि
ramkrishna December 1, 2017	प्रकृतिको यस्तो उपहार ! खोलामा पानीको सट्टा यसरि सुन बग्न थालेपछि
भारतमा एक नदी यस्तो पनि छ, जहाँ सुन वगिरहेको छ । समाचारका अनुसार यो नदी आदिवासी इलाकेबाट बग्ने गर्दछ । यहां बस्ने मानिसलाई सुनको बास्तविक मुल्य अन्दाज छैन,
यसकारण केही स्थानीय व्यापारिले उक्त सुनलाई अत्यन्त न्यून रकममा स्थानियसँग किनेर बजारमा कयौँ गुना महंगोमा बेच्ने गरेको जनाइएको छ । झारखंड को राजधानी रांचीबाट करीब १५ किलोमीटर टाढा आदिवासी क्षेत्र रत्नगर्भा छ ।
उक्त स्थानमा स्वर्णरेखा नाम गरको नदी बग्दछ । मानिसहरुको दावी छ कि उक्त नदीको उत्पत्ती स्थानमा सुनमो भण्डार छ । आदिवासी दिन रात नदीमा बग्ने सुनलाई जम्म गरेर कम मुल्यमा व्यपारीलाई बेच्दै आएका छन् ।
यसबाट उनीहरुको जीवनको गुजारा चलिरहेको छ । हैरान बनाउने कुरा त के छ भने उक्त नदी अन्य नदीमा नमिसिइ सिधै बंगालको खाडीमा पुग्ने गरेको छ । -एजेन्सी ।nayabato
Previous Previous post: यी देशमा छन् विश्वकै खतरनाक महिला सैनिक
Next Next post: ७ वर्षमा १० हजार डलर कसरी बन्यो ११० करोड डलर